साबधान ! कोरोनासंगै आयो फेरी अर्को नयाँ रोग ‘ब्ल्याक फंगस जसले आँखा नै निकाल्न बा’ध्य पार्छ यस्ता छन् लक्षणहरु – Enepali Samchar
e nepalisamchaar // काठमाडौं। भारतमा कोरोनाबाट निको भएका सयौं बिरामीहरुमा अर्को संक्रमण देखिएपछि उनीहरुको आँखा निकाल्नु परिरहेको छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा यो संक्रमणमा परेर आँखाको ज्यो’ति गु’माउने बिरामीको संख्या सयौं भइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक सोमबार इन्दौरको एमवाइ अस्पतालमा २ जनाको आँखा नि’कालिएको छ । यी बिरामीहरु ५० र ६५ वर्षका छन् । उनीहरुको ज्या’न बचाउनको लागि डाक्टरहरुसँग आँखा नि’काल्ने बाहेक अरु विकल्प बाँकी थिएन ।
यी बिरामीहरुले कोरोनाभाइरसलाई जितिसकेका थिए । तर, कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका यी बिरामीमा नयाँ संक्रमण देखिएको थियो । यो नयाँ संक्रमणलाई चिकित्सकीय भाषामा म्यु’कर’माइ’को’सि’स र सामान्य बोलीचालीको भाषामा ब्ल्या’क फं’गस भनिन्छ ।
यी बिरामीहरुमा सु’गर ले’भल अत्यन्तै बढेको थियो । यही कारण उनीहरुलाई फं’गल अ’र्थात ढु’सीको सं’क्रमण भएको थियो । आश्चर्यको कुरा यी २ बिरामीलाई पहिले म’धु’मे’हको कुनै समस्या थिएन ।
भारतीय अखबार दैनिक भास्करका अनुसार इन्दौरमा देखिएका यी दुई केस नयाँ होइनन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित र कोरोना जितिसकेकाहरुमा म्यु’क’र’माइ’कोसि’सको संक्रमणका केसहरु ठूलो संख्यामा देखिएका छन् । यो दुर्लभ र प्रा’ण’घा’त’क फं’ग’ल सं’क्रमण हो ।
यसको समयमै उपचार गरिएन भने आँखाको ज्यो’ति जा’नुका साथै मृत्यु पनि हुन सक्छ । साइनस अर्थात नाकको भित्री तन्तुहरु हुँदै आँखासम्म पुग्ने यो संक्रमणलाई पूरै शरीरमा फैलिनबाट रोक्न डाक्टरहरुले बिरामीको अपरेशन गरेर संक्रमित आँखा वा बंगाराको मा’थिप’ट्टिको उक भाग निकाल्नु पर्छ ।
म्युकरमाइकोसिले बिरामीको साइनसका साथै आँखा, म’स्तिस्क, फोक्सो वा छालामा पनि आ’क्र’म’ण गर्न सक्छ । समय छँदै यसलाई नियन्त्रित गरिएन भने यो प्रा’ण’घा’तक हुन्छ । ब्ल्याक फंगसले धेरैजसो रोग
प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएकाहरुलाई आ’क्र’म’ण गर्छ । बलियो प्रतिरोधी क्षमता भएकालाई सामान्यतया ब्ल्या’क फं’गस’को खतरामा रहेको मानिँदैन । कोभिड टास्क फोर्सका अनुसार कोरोना संक्रमित रहेकै क्रममा ब्ल्या’क फं’ग’सको सं’क्रमण भए बिरामीको ज्या’न जा’ने ख’तरा बढ्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार बिरामी जति लामो समयसम्म अस्पतालमा रहन्छ र जति लामो समयसम्म स्टे’रोएड औ’षधि खा’इरहन्छ उसलाई ब्ल्या’क फं’गसको खतरा बढ्दै जान्छ । ब्ल्या’क फं’गर पहिले नै हावा र माटोमा हुन्छ ।
ब्ल्या’क फं’गसका हावामा भएका कण नाकबाट प्रवेश गर्छन् । त्यहाँबाट फो’क्सो र त्यसपछि र’गतको माध्यमबाट म’स्तिस्कमा पुग्छन् । नाकबाटै यसको संक्रमण साइनस हुँदै आँखासम्म पुग्छ । बिरामीको छाती वा टाउकोको एक्स रे वा सिटी ‘स्क्या’नबाट यसको सं’क्रमण पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यो संक्रमण अहिले भर्खरै आएको नयाँ संक्रमण भने होइन । यो मा’इक्रोमाइ’सि’ट्स नामको ढुसीका कारण हुन्छ र यो शरीरमा ती’ब्र रुपमा फैलिने संक्रमणको रुपमा चिनिन्छ । यसअघि यसलाई जा’इ’गो’माइ’को’सिस नामबाट चिनिन्थ्यो ।
अहिले कोभिड सं’क्रमण भएका वा निको भइसकेका बिरामीमा यो सं’क्रमण धेरै देखिन थालेको छ । यसको उपचार चाँडै नै गरिए ए’न्टि’फं’गल औ’ष’धि’बाट पनि निको हुन सक्छ र ढिलो भएमा संक्रमित अं’ग नि’काल्नको लागि श’ल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यो संक्रमणको उपचार एन्टिफंगल औ’ष’धि’बाट हुन्छ र ढिलो भए शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । डाक्टरका अनुसार यो संक्रमणबाट बच्नको लागि म’धु’मेह नियन्त्रण गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । बिरामीलाई ‘स्टे’रो’एड’ औ’षधि’हरु कम गर्नुपर्छ र इ’म्युन मो’ड्यु’लेटि’ङ औ’ष’धि ब’न्द गर्नुपर्छ ।
कोभिड टा’स्क फो’र्सका अनुसार शल्यक्रियाभन्दा अगाडि शरीरमा पानीको उचित मात्र कायम गर्न ४ देखि ६ हप्ता आइभी स्ला’इन पानी चढाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि ए’न्टिफं’गल थेरापी दिनुपर्छ जसमा अ’फ्टो’टेरि’सि’न बी नामको सुइ प्रमुख हो ।
ज्वरो आउनु, टाउको दु’ख्नु, खोकी लाग्नु वा सास फेर्न गाह्रो हुनु। नाक बन्द हुनु, नाकमा सिंगानका साथ र’गत आउनु। आँखा दुख्नु, आँखा सुन्निनु, एउटा चिजलाई दुइटा देख्नु वा देख्न नसक्नु। अनुहारको एकपाखा मात्र दुख्नु, सुन्निनु। दाँत दुख्नु, दाँत ह’ल्लिनु, च’पाउँदा दुखाइ हुनु। वान्ता हुँदा वा खोक्दा ठूलो मात्रामा र’गत ब’ग्नु।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७७ मंसिर १ गते सोमबार श्री पाथीभरा देवीले सबैको कल्याण गरुन